Thompson naWambaugh, akanyanya matema echinyakare ekupisa kwakanyanya | Zvazvino Zvinyorwa
Kuwa uku hakusi kuita chero chinhu chakanaka. Kusanaya kunomhara nyika yehafu yeSpain. Kuchamhembe kwakadziva kumadokero mafuro emirazvo ayo vamwe vanhu vasina moyo vakaisa panzvimbo dzakanaka dzeGalician neAsturian. Kumusoro kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva, mweya mizhinji yanga ichidziya kwenguva yakati rebei. Uye kwete gore riri kumusoro kuti uvandudze mhepo. Ehe, auspicious nguva yeyakaipisisa muverengi muverengi fungidziro. Uye ndeipi nzira iri nani pane kutarisa iyo zvimwe zvinokurumidza zvekare.
Jim Thompson naJoseph Wambaugh ndiwo mazita maviri anonyanya kufarirwa uye anoremekedzwa yeiyo North America mhosva yekunyorwa kunyanya uye zvakare zvakajairika. Maitiro yemamwe ma greats eiyo genre senge angelino James ellroy kana iyo viking Jo Nesbø muEurope yekare, chero anozviremekedza anoda werudzi anofanira kunge akaverenga rimwe remabasa ake. Nhasi ndinoongorora vaviri vamiririri vake.
1.1 Mweya makumi maviri
1.2 Mhondi mukati mangu
2.1 Vakuru vezana vezana
2.2 Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Hollywood Station
Kune nzira makumi matatu nembiri dzekutaura nyaya uye ini ndadzishandisa dzese, asi pane zano rimwe chete: zvinhu hazvisi izvo zvavanoratidzika.
(Anadarko, Oklahoma, 1906 - Huntington Beach, California, 1977). Thompson akafa asina kuzivikanwa kwaakawana nekufamba kwenguva. Vamwe vanoiisa muAmerican Holy Trinity yemhando iri padivi Chandler y hammett chimiro. Aive iye munyori webasa rakakura na 29 enganonyorwa rakaburitswa uye rakatonyanya kusatsikiswa. Pane chinhu chikuru mukati maro autobiographical (Aive mwanakomana wesherifi akashata uyo akatizira kuMexico akazopedzisira azviuraya).
Akaratidzira mahero aigara muUnited States muhafu yekutanga yezana ramakumi maviri nemapfekero ake kudhakwa. Iye aingorarama pane zvinyorwa zvake, asi aizviita pane ake zvinyorwa zvemapepanhau. Akaburitsa yake yekutanga novel ine makore makumi matatu nemapfumbamwe uye akanyora gumi nembiri mugore nehafu. Aive zvakare mumuchinjiko weWitch Hunt yeSenator Joseph McCarthy's Commission kwaakapihwa mhosva muna 12.
Pakati pehunyanzvi hwake anofanirwa-kuve nemazita senge maviri pazasi, asi zvakare Husiku husiku o Kutiza, pakati pevamwe. Akasainawo maviri e zvinyorwa mukurumbira kupfurwa na Stanley Kubrick mune zvimwe zviviri zvakagadzirwa zvema cinema, Akakwana heist y Nzira dzeKubwinya.
Mweya makumi maviri
Nick corey ndiye akajairika mutungamiriri weguta diki reAmerica anoita kunge kudzikama uye kujeka, asi chaizvo kungwara here kunyepedzera kunge benzi. Huchenjeri ihwo ngozi chaiyo kune avo vakatenderedza. Pamusoro pezvo, zviito zvake zvese ndezvekubatsira kwake pasina hanya nezvezvinozoitika kune vamwe. Kufamba kwaThompson kwehungwaru kutora mukomana asina hunhu uye asina moyo saCorey akapedzisira atifarira uye isu tinoda kuti akunde musarudzo nyowani dzemkomishina achipikisana nemukwikwidzi uyo ari munhu akavimbika.
Mhondi mukati mangu
Yakanyorwa mukati 1952, inotaura nezve hupenyu hwakanyarara muCentral City, guta remafuta muWest Texas. Ikoko Mutevedzeri Sheriff Lou Ford, uyo munhu wese waakatora semunhu ane rugare uye ane hushamwari, anodzokerazve ku "hosha" yakamuita ita mhosva muhuduku hwake. Kubva ipapo Lou anga achida kuoneka zvakajairika pakati pezvimwe zvinhu, semuenzaniso, muhukama hwake naAmy Stanton, musikana anobva kumhuri yakanaka, saiye. Asi zvese zvinozoendesa kune yeropa apocalypse.
Yakava firimu adapta muna 2010 inotungamirirwa na Michael Winterbottom uye nyeredzi Casey Affleck, Kate Hudson naJessica Alba.
Nhoroondo dzaWambaugh dzakaponesa hupenyu hwangu. James ellroy
Wambaugh asvitsa makore makumi masere Ndira gore rino. Mwanakomana wemapurisa, akanyorera muMarines aine makore gumi nemanomwe. Mushure mekupedza kudzidza kubva kuChaffey College, akapinda mu LAPD muna 1960, umo maakapedza makore gumi nemana akasvika mutikitivha sajeni. Iye ndiye munyori wenyaya dzinoverengeka umo fungidziro uye chokwadi zvakasanganiswa. Pakati pavo pane zvakare Munda wehanyanisi o Iyo yebhuruu knight.
Vakuru vezana vezana
Ndiyo bhuku rake rekutanga uye rakaburitswa muna 1971. Rinotiudza iyo Makore mashanu ekudzidzira basa kubva kumapurisa matatu eLos Angeles mumakore makumi matanhatu. Pakati peino nguva ivo vanoferefeta kuba uye kutambudza pfambi, kupedza hondo dzezvikwata uye kudzikamisa kupokana kwemhuri. Asi ivo zvakare vanoona kuti ivo vari kure nekuenderana mune izvo mumwe neumwe anonzwisisa seakanaka uye akaipa.
Iyo ine diziki yekumhanya uye iri mufananidzo wakavimbika wemafambiro emapurisa nemaawa avo marefu ekushanda muhofisi kana kufamba mumigwagwa. Vakachinjisa iyo bhaisikopo muna 1972 uye vakaita nyeredzi mariri George C. Scott naStacey Keach.
Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Hollywood Station
Panguva ino protagonists vari mapurisa kubva kunzvimbo yeHollywood. Ivo vanopfuura nenzira yenguva dzose pasi peziso rekutarisa repurisa sajeni akatumidzwa zita rekuti Oracle. Asi maitiro iwayo anozochinja kana nhevedzano yezvinoitika zvisina hukama ichivaunza yakanyanya kushamisa kesi zvakaitika mumakore achangopfuura. Kugadziriswa kwako kuchakuyeuchidza kuti muLos Angeles hapana muganho wekutyisa uye kunyanyisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Thompson naWambaugh, akanyanya matema echinyakare kudonha kwakanyanya
Maviri magamba angu …… .. .. ripoti yakanaka
Ndatenda. Tinogovana magamba.
Fernando Aramburu anokunda iyo National Narrative Award 2017 na "Patria"